लोकतान्त्रीक मुलुकमा पनि पत्रकार असुरक्षित भएका छन,यो दुर्भाग्य होः अध्यक्ष डा. बिष्ट (भिडियोसहित)
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयको लागि थप कानुनको निर्माणमा जोड
प्रकासित मिति : २०७४ बैशाख २०, बुधबार प्रकासित समय : १०:४३
काठमाडौं । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र बिष्टले लोकतान्त्रीक अभ्यासमा अघिबढेको मुलुकमा समेत पूर्ण रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको कार्यान्वयन नहुनु र राज्यपक्षबाटै पत्रकारमाथि हमला हुनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन ।
अध्यक्ष बिष्टले आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको प्रभातफेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा त्यस्तो बताएका हुन ।
डा. बिष्टले मुलुकमा सामाजिक,राजनीतिक परिवर्तनहरु भएको भएपनि हाम्रो देशमा अझै पूर्ण रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको अनुभूति पत्रकारहरुले गर्न नसकेको बताए । उनले भने–‘अहिलेपनि प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरु भै रहेका छन । प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई निरुत्साहीत गर्ने, दण्डहिनता बढाउने खालका सोच र चिन्तनहरु हावी भएका छन । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न जरुरी छ ।’
उनले भने–‘हामी लोकतान्त्रीक मुलुकका पत्रकारहरुले अझै पनि पूर्ण रुपमा प्रेस स्वतन्त्रताको हक पाउन सकेका छैनौ । विश्वका धेरै मुलुकका श्रमजिवि पत्रकारहरुको पनि यहि अवस्था रहेको छ । पत्रकारहरुमाथि पटक पटक राज्य तथा अन्य पक्षहरुबाट हमला हुने गरेका छन, हामी त्यसको अन्त्य होस भन्न चाहन्छौ ।’
सरकारले संविधानमा लेखिएको प्रेस स्वतन्त्रतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै उनले भने–‘पत्रकारलाई सुरक्षित बनाउनका लागि सरकारसमक्ष हामी आग्रह गर्न गर्दछौ । संविधानले धेरै हदसम्म प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । साथै थप कानुन बनाएर यसलाई अझै ब्यवस्थीत गराउनु पर्ने छ ।’
प्रेस स्वतन्त्रतालाई ब्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन । उनले प्रेस स्वतन्त्रता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक केही कानुनहरुको निर्माण नभएकाले त्यसको ब्यवहारीक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका दाबी गरें ।
उनले यसबर्ष प्रेस स्वतन्त्रता हनन सम्बन्धीका ७१ वटा घटना महासंघले हेरेको बताए । गत बर्ष १४० वटा घटनाहरु रिफर समेत उनले बताएका छन । गत बर्ष मधेस आन्दोलनका क्रममा घटनाहरु बढेको उनले बताए ।
पत्रकार महासंघले यस बर्ष ‘संवेदनशील समयका लागि संमवेदनशील विचारः शान्तिपूर्ण,न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणमा मिडियाको भूमिका’ भन्ने मुल नाराका साथ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाएको छ । बाँकी हरपल नेपाल डटकमले तयार गरेको यो भिडियोमा हेर्नुहोस ।